Kuleli sonto kuSAZIWAYO NEMALI sixoxa noYenziwe Sithole, owumlingisi. Useke walingisa emidlalweni esingabala kuyona i-Nandi The Musical, Kungenxa Yokufa, Buchitheka Bugayiwe, Imbewu ne-Durban Gen - Umbele I SMME Profiles I Labour I Economics I Agriculture I Executive Interviews I Personal Finance News
Yebo, ngangiphiwa, yize yayingenkulu ngenxa yesimo sezimali kubazali bami.
Ngayivula e-Absa ngenkathi ngithola umsebenzi wokuqala wokulingisa emdlalweni weshashalazi ngo-2014.
Wukuthi imali iba khona iphinde ingabi bikho, ngakho ukuzikhathaza ngayo kuyize leze kanti nokuba nayo kubaluleke kakhulu futhi kunjalo nje akufanele ize iphele ingekho into ephathekayo oyenzile ngayo.
Ngiqale ngo-2012 ngiseyisitshudeni eBerea Tech, ngathola umsebenzi e-internet café. Ngangihola uR220 ngesonto.
Ngathenga ngawo izinto ezincane zokugqoka.
Wukuthenga indawo yokwakha yize ngingakakhi kuyona kodwa lokho kusho lukhulu kimina nabazali bami.
Wukuyisebenzisa budedengu ezindaweni zobumnandi nabangani.
Yebo, kodwa ngasheshe ngaphuma kulona futhi ngafunda nokuthi kuyingozi ukungena ezintweni ezifana naleyo (nto).
Wukuthi imali ayiyona impande yesono kodwa wukungabi nayo okwenza abanye abantu bagcine benza izinto ezingalungile.
Ngikuthanda kakhulu ukutshala imali, ngakho ngingatshala kakhudlwana kunaloku esengitshale khona okwamanje. Ngingaphinde ngiqale ibhizinisi lokudla bese esala lapho ngizijabulise ngayo nomndeni wami.
Ngingathi uma bethola imali abenze izinto abazoziqhenya ngokuzenza, ikakhulukazi ngoba umkhakha esikuwona awufani neminye, ungalala konke kuhamba kahle namuhla, kuse izinto sezishintshile. Abavule amabhizinisi abazophephela kuwona uma sekubheda.